people Nepal » आजको राशिफल : पौष ५ गते बुधबार / डिसेम्बर २० तारीख आजको राशिफल : पौष ५ गते बुधबार / डिसेम्बर २० तारीख – people Nepal
आजको राशिफल : पौष ५ गते बुधबार / डिसेम्बर २० तारीख
Posted on December 20, 2017 by Tara Nidhi
आज श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल पौष ५ गते बुधबार इश्वी सन २०१७ डिसेम्बर २० तारीख पौष शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथी चन्द्रमा धनु राशिमा सुर्य दक्षीणायन हेमन्त ऋतु –
मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा बृद्यि हुनेछ । नयाँ मित्रहरु सगँ को भेट घाटमा सामान्य यात्रा तथा खर्च हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । अचल सम्पतीमा ह्रास आउनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । लगनसिलताले अरुको मन जित्न सफल रहिनेछ ।
कुनै पनि निर्णय हतासमा नगरैकै बेश हुनेछ । स्वास्थमा आएको गडबडीले दिन निरास पुर्ण ब्यतित रहला । आम्दानि मध्यम रहेता पनि बोलिको कारण साधारण दुर्घटनाको सम्भाबना रहेको छ । नजिकका ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले सहकार्यमा झन्झट ब्यर्होनु पर्नेछ ।
मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीएका कार्यहरु सजिलै पुर्ण हुनेछन । सामान्य कार्यको निम्ति धेरै श्रम र समय खर्चीनु पर्ने योग रहेको छ । जिबन साथीको सहयोगले गरिएको ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ मिल्नेछ । बोलिको प्रभुत्वले मानसम्मानको प्राप्ति हुनेछ ।
अरुको पुर्ण बिश्वासले तपाईलाई आघात दिलाउला । अपरिपक्क निर्णय गलत साबित हुनाले अपजस भोग्नु पर्ने छ । शुभ चिन्तकको बृद्यि हुनाले मनमा उत्साह बढ्नेछ । परोपकारको क्षेत्रमा समय र धन खर्चनु पर्ने समय रहेको छ । यात्रामा एक्लोपनको महसुस हुनसक्ला ।
मातृ पक्षको स्वास्थमा देखापरेको असरले सामान्य समस्या पैदा गर्न सक्नेछ । पठनपाठनको क्षेत्रबाट मनग्य लाभ उठाउन सकिएला । आफु भन्दा सानाको सहयोगमा गरिएको कार्यहरु सफल रहनेछन् । बौधिक ब्यक्तित्व सगँको सामिप्यता आगामी दिनलाई मार्गदर्शन बन्नेछ ।
कार्य क्षेत्रमा लगाईएको श्रमको उचित मुल्यांकन हुनेछ । सामान्य कठिनाई पश्चात मनग्य आम्दानीका स्रोतहरु फेला पर्नाले मन उत्साहित रहनेछ । पारीवारिक झोरझमेलाको फन्दामा परिनाले दिन निरासा पुर्ण रहला । ब्यापार ब्यवसायमा साजेदारी फाईदा जनक नरहला ।
हतासमा गरीएको कार्यले झन्झट दिलाउला । मित्र तथा दाजु भाईको साथ सहयोगमा कमि आउन सक्नेछ । आटँ शाहसको कमीले कार्यमा ब्यबधान आउला । प्रतिपक्क्षी सबल रहनाले तपाईलाई आफ्नु कमजोरीको महसुस हुनेछ । मनोरञ्जन पुर्ण यात्राको योग रहेको छ ।
अरुको अनुशरणले तपाईलाई समान्य झन्झट वा अपजस दिलाउन सक्नेछ । स्वास्थमा आएको खराबिले कार्यमा ढिलाई उत्पन्न गराउनेछ । सामान्य बादबिबादको चक्करकाट्नु पर्नेछ । भोज भतेरमा सरीक हुने अबसर प्राप्त हुनेछ । सन्तान सम्बन्धी समस्याले सताउला ।
सहि निर्णय हुन नसक्दा परिबारीक कलहको सामाना गनुपर्नेछ । शारीरिक आलस्यताले सताउनेछ । जिबन साथीको सहयोगले ब्यापार ब्यवसायमा सुधार आउनेछ । जिद्यी स्वभाब तथा अरुले देखाएको बाटो अनुशरण नगर्नाले सामान्य दुर्घटना निम्त्याउला । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु होला ।
लापरबाहले धनमालमा सामान्य क्षति हुने सम्भाबना रहेको छ । प्रेम सम्बन्धमा तिक्तता पैदा हुनेछ । अनावश्यक खर्च नियन्त्ररण गर्न गारो हुन सक्ला । आफ्नु प्रिय ब्यक्ति सगँको बियोगले मन निरुत्साहित रहला । अन्य ब्यक्तिको बिश्वास गर्ने बानिमा सुधार ल्याउनु पर्नेछ ।
मान्यजनको स्वास्थमा सामान्य खराबिले कार्यमा ढिलाईको सामना गर्नु पर्ला । बाकपटुताका कारण नयाँ कार्य थालनिको अबसर प्राप्त हुनेछ । कुराकाट्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ । आम्दानी बृद्यिका लागी बीद्योत ब्यक्तित्वहरुको मार्गदर्शन अबलंबन गर्नु लाभदाइक रहला ।
परिवारको सहयोगले बौधिक तथा आर्थीक बिकासको बाटो फेला पर्ने छ । सभासम्मेलनमा सहभागी हुने अबसर प्राप्त रहनेछ । स्वास्थ सम्बन्धी सामान्य समस्याले मनमा तनाब उत्पन्न गराउन सक्ला । परीस्थीति सगँ जुध्ने क्षमतामा बृद्धि हुनाले कार्य सफल रहनेछ ।
रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर सम्झौता